Indawo entle yokuhlala encinci yaseYangpu Dalian Road, kufutshane neSibhedlele saseXinhua, eTongji, kwiYunivesithi yaseFudan, Umgca we-8 weSitishi seMetro saseAnshan Xincun, ukufikelela ngokuthe ngqo kwiPeople's Square, iBund 507.
Igumbi lakho lokulala e indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo sinombuki zindwendwe ongu玲
Kukho amagumbi amaninzi kwisakhiwo esinye. Nceda ungahoyi ulwazi lobhaliso lweqonga.Le ndawo ikumgangatho we-5 kwisakhiwo. Iindawo zokuhlala ezijikelezileyo zininzi, iivenkile ezinkulu, iivenkile zokutyela kunye neekhefi zonke ziyafumaneka, kwaye umgaqo ongaphantsi uqhagamshelwe ngaphandle komthungo. Igumbi likhulu, lixhotyiswe ngezixhobo zasekhitshini, umatshini wokuhlamba kunye nesomisi, lilungele ukurenta ixesha elide.
Bonisa zonke 24 izinto onokuzisebenzisa
Ezantsi kukho iXuhui Shopping Mall.Igumbi elisezantsi lixhotyiswe ngenkqubo yokhuseleko yeeyure ezingama-24. Iindawo zokutyela ezingqonge, iivenkile ezinkulu, iivenkile zekofu, kunye neemarike zemifuno ziyafumaneka.Umgca 8 weSikhululo saseAnshan Xincun, uhambo lwemizuzu emi-2, kunye ne ikheshi yokuhlala unakho ukuqhagamshela ngqo Line 8. "Anshan New Village" iholo station, ukuze uqonde ukuhamba lula, ndiyathemba ungadibanisa ezinye izinto ezintle ngexesha uhambo lwakho e Shanghai, kwaye indlu nokufuya eziphilayo ixesha elide.
Umbuki zindwendwe ngu- 玲
Ujoyine nge- 2021 Juni
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Shanghai